အဘယ်မှာရှိ nulliparous အမျိုးသမီးတွေအတွက်သားအိမ်ခေါင်း၏တိုက်စားမှု? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အဘယ်မှာရှိ nulliparous အမျိုးသမီးတွေအတွက်သားအိမ်ခေါင်း၏တိုက်စားမှု?
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှု vrozhdnnoy ectopia ဟုခေါ်သည်။ အဲဒီမှာကနေ nulliparous အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အဘယ်သူမျှမ HPV ပိုးသို့မဟုတ် comorbidities လည်းမရှိလျှင်ဘာမှလုပ်ဖို့မရှိပါဘူးပုံမှန်ဇီဝကမ္မ sostoyanie.S ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်မီးယပ်သားဖွားသာထိန်းချုပ်။
ဏုလျှင်သားအိမ်ခေါင်း၏တိုက်စားမှုကြောင့်အစိတ်ဒဏ်ရာ travmy.Dazhe အချို့ကိုမျိုးဖြစ်ပေါ် zapuschena.Mozhet ဖြစ်နှင့်မိတ်ဖက်သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးရှိသည်မဟုတ်မဟုတ်လျှင်တစ်ခုကိုကြောင့်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး၏စည်းမျဉ်းများ Non-ပှဲအထိတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်နှစ်ဦးစလုံး partnerov.Uspeshno ဆီနဲ့ကုသ, ဖယောင်းတိုင်။ ဆေးကုနေစဉ်, မိတ်ဖက်ငြင်းဆန်။
ဒေါက်တာ Myasnikov ၏စာတမ်းများနှင့်စာအုပ်များတက် Pick ကအကြောင်းကိုပြောပြရန်ရေပန်းစားသည် ..
nulliparous အမျိုးသမီးတွေအတွက်တိုက်စားမှု, HPV ပိုး (လူ့ papilloma virus ကို) သို့မဟုတ်အခြားငုပ်လျှိုးနေရောဂါပိုးကူးစက်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာလိုအပ်သောစမ်းသပ်မှုများထွက်သယ်ဆောင်နှင့်သင့်လျော်သောကုသမှုလိုအပ်ပါကရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုရောဂါကူးစက်မှု၏ရှေ့မှောက်တွင်ညွှန်ပြပါကကုသရန်လိုအပ်ပေသည်။ တိုက်စားမှု၏စံ cauterization, nulliparous အမျိုးသမီးများ, သူတို့တစ်တွေပိုပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့လမ်းနဲ့ကုသနေကြပြုမရပါ။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတိုက်စားမှုရိုင်းစိုင်းတဲ့နည်းလမ်းများနဲ့ကုသ, ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာရုရှားတွင်။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာတိုက်စားမှုရောဂါထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပါ, သို့သော်စံတစ်မူကွဲ။ A ကောင်းဆုံးမီးယပ်သားဖွားဒီသတိပြုမိသည်နှင့် cauterization သို့မဟုတ်တခြားနေရာမှအမျိုးသမီးတစ်ဦးမပို့ပါလိမ့်မယ်။ တိုက်စားမှု, လမ်းဖြင့်လည်းမွေးရာပါနိုင်ပါတယ်။
21 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,398 စက္ကန့်ကျော် Generate ။